यी हुन् महंगा गाडी चढ्ने मन्त्री र सचिवहरु, कुन मन्त्रीले कुन गाडी चढ्छन् ? | Diyopost - ओझेलको खबर यी हुन् महंगा गाडी चढ्ने मन्त्री र सचिवहरु, कुन मन्त्रीले कुन गाडी चढ्छन् ? | Diyopost - ओझेलको खबर
यी हुन् महंगा गाडी चढ्ने मन्त्री र सचिवहरु, कुन मन्त्रीले कुन गाडी चढ्छन् ?
Diyo post बिहिबार, पौष ०५, २०७५ | ९:३७:४५
काठमाडौँ, पुष ५ । मन्त्री बनिसकेपछि सामान्य नेताको पनि जीवनशैली फेरिन्छ । मन्त्रीहरुले प्रयोग गर्ने गाडीको विषयमा कहिलेकाँही हल्ला चल्छ । मन्त्रालयको कामका लागि सरकारले मन्त्रीहरुलाई गाडी उपलब्ध गराएको हुन्छ । केही मन्त्रीहरु सरकारले उपलब्ध गराएको पुरानै गाडी चढ्छन भने केही मन्त्रीहरु सपथ लिनासाथ नयाँ गाडी खरिदतर्फ लाग्छन् । यहाँ मन्त्रीपरिषदका त्यस्ता मन्त्रीहरुको बारेमा उल्लेख गरिएको छ जो आफु पनि महंगो गाडी चढ्छन ।
रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले नेपाली सेनाबाट प्राप्त करिब २ करोड पर्ने टोयोटाको ल्यान्डक्रुजर, मन्त्रालयबाट प्राप्त करिब ५० लाखको स्कारपिओ र गृह मन्त्रालयले दिएको एउटा कार प्रयोग गर्दै आएका छन् । रक्षासचिवले स्कारपिओ कम्पनीको गाडी चढ्छन् ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल एक करोड ५५ लाख पर्ने मित्सुबिसी पजेरो गाडी चढ्छन् । स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव टोयोटा कम्पनीको करिब २ करोड रुपैयाँबराबरको ल्यान्डक्रुजर गाडी चढ्छन्, कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाल टोयोटाको ल्यान्डक्रुजर प्राडो चढ्छन् । कानुनसचिवले भने स्कारपिओ र हुन्डाईको आइ–२० आस्टा मोडलको दुईवटा गाडी चढ्दै आएका छन् ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र सचिव राजन खनालले निसान कम्पनीको ‘निसान एक्स–ट्रायल’ मोडलका गाडी चढ्दै आएका छन् । ती गाडीको नेपाली बजारको मूल्य करिब एक करोड हाराहारी छ ।
वनमन्त्री शक्ति बस्नेतले पनि ल्यान्डक्रुजर प्राडो चढ्दै आएका छन् । मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओलीसँग पनि टोयोटाकै ल्यान्डक्रुजर प्राडो छ । खानेपानीमन्त्री विना मगर र सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा ल्यान्डक्रुजर प्राडो चढ्छन् ।
शिक्षा मन्त्री गिरिराज पोखरेल महिन्द्राको एक्सयुभी ५०० मोडलको गाडी चड्दै आएका छन् । सचिव खगराज बरालपनि महेन्द्राको एक्सयुभी ५०० मोडल नै चढ्छन् ।
संघीय मामिला मन्त्री लालबाबु पण्डित र सचिव दिनेश थपलियासँग फोर्ड कम्पनीको इन्भेडर गाडी छ । ती गाडी एक बर्षअघि एक करोड १० लाखका दरले खरिद गरिएको हो ।
कृषि मन्त्री चक्रपाणि खनाल फोर्ड कम्पनीको एक करोडको गाडी चढ्छन् । सचिव युवकध्वज जोशीसँग पनि फोर्ड कम्पनी र निसानको दुइ वटा गाडी छन् । त्यस्तै युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर सुनारले हुन्डाइको क्रेटा गाडी प्रयोग गर्दैछन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले टाटा कम्पनीको करिब ६० लाख पर्ने स्ट्रोम गाडी गढ्दै आएका छन् । उक्त मन्त्रालयका सचिवद्धय यमकुमारी खतिवडा र चन्द्र घिमिरेले पनि स्ट्रम गाडी नै गढ्दै आएका छन् ।
बिहिबार, पौष ०५, २०७५ | ९:३७:४५